WASIIR MAXAMUUD XAASHI CABDI: XADHIG MISE WAX IS-WAYDIIN | Saxil News Network
WASIIR MAXAMUUD XAASHI CABDI: XADHIG MISE WAX IS-WAYDIIN
August 23, 2016 - Written by Abdisalaan Harir
Dadku waa aadame, wax qalloocin kara, waxna toosin kara, Qasab maaha in 100% sax la noqdaa. Balse dhaliishii wax toosina in la isugu cagajugleeyo oo xadhig lagu mutaystaa waa caqlixumo aan wada noolaansho iyo is fahan marnaba keennahayn.
Siciid Maxamuud Gahayr waa: Qoraa,Macallin, CIlmibaadhe madax-bannaan iyo Abwaan dhallinyarada reer Soomaalilaan ka mid ah. Fikirkiisa si xor ah ayuu u cabbiraa. Dhalliisha ayuu saaraa hadba cidda dulmanaha ah ee xaqa ummadda ku tumanaysa. Qalinkiisu waa mid maatida u adeega oo aan madax iyo minjo toona midna u tudhin. Hadba aragtida uu qabana kaga falceliyaa dareen waddannimo. Waa maddaale bulshada u diran.
Siciid maalmahan waxa uu qalinka ku fiiqay dhalliilaha dul hoganaya madaarka Hargeysa iyo sida loo dayacay dadkii deganaa degaanka loo dayray madaarka. Wuxu farta ku fiiqay dhibka ay u leedahay dad danyar ahaa oo dhulalkoodii laga qaaday iyo qaar madaxda madaarka ka mid ah, oo lagu wareejiyay dhulalkaas badh. Sidoo kale, ardayda ubaxa ah ee soo koraya iyo siday uga caddilan yihiin waxbarashada iyo dugsi la’aanta haysata. Dadkii degaanka oo iyagii dhulalkoodii loo kala wareejiyay oo kii wax haystayna dhul la siiyay kii kalana cagta la dulmariyay. Dhibaatooyinkan iyo sida madaarka loogu naas-nuujiyo dad gaar ah ayuu Siciid soo bandhigay. Taasna been kama uu sheegin ee wax jira oo ka hadal iyo ka-dhiidhiba mudan ayay ahayd. Hadduu keligii wax ka qoraayayna ma ahayn inaanay cid la arkaysaa jirin Siciid ceebahaas uu soo bandhigay. Balse hadba cidda ka hadalkeeda mudan uun ayaa loo daayaa inay ka warbixisee qalad baan u arkaa wasiirka awooddiisa wasiirnimo u adeegsaday inuu Siciid ku aamusiiyo. Taasina maaha wax dhacaya ama suuroobaya. Kun Siciid oo dareemaya dulmigaaga iyo danayn la’aantaada ayaa jira Wasiir.
Xadhig in loogu jawaabo Siciid, halkii dhalliilaha laga toosin lahaa liidasho ayaan u arkaa. Maxamuud Xaashi Cabdi oo aan shaqo hadda ku lahayn madaarkuna uu jeelka dhigo; waa xaqiraad xukumaddu awood u siinayso dulmaha bulshada inuu burburiyo waddanka. Waa mid aan la qarin karin inuu Maxamuud Xaashi Cabdi uu qabiilkiisa madaarka ka shaqaalaysiiyey.. waa mid aan la qarin karayn inuu shirkado uu gacanta ku hayaa ay adeegyo hagar la’aan ah ka qabtaan madaarka.. waana mid aan indhaha laga qarsan karin inuu weli dusha ka maamulo isagoo madaxtooyada fadhiya madaarka. Waxaas oo dhan ma Ilaahay baa sed u siiyey Maxamuud Xaashi Cabdi? Waa maya ee waa awood uu isa siiyey. Taasna inuu hadba qofka xaqiisa ka hadla xadhig la miciinsado ka yeeli mayno.
Wasiirka madaxtooyadu maaha wasiirka madaarka ee horta taas ogow. Haddaad adigu dhaxal aad leedahay u aragto maamulka madaark, sidaad mooddayso wadaad maahee taasna ogow. Degaanka dhibka ka jira iyo hagardaamada gaadiidka haysata haddaan bulshada looga jawaabin, dulmigaasi dagaal buu isu rogi doonaa oo danab kacay ayay noqone, ama Maxamuud Xaashi Cabdi ahoow ama madaxweyne Siilaanyo’e ummaddaas waa in dhibkeeda laga jawaabaa. Xaq-u-dirirka aad xadhiga kula itaalsatayna soo daa, boqolaal kale oo dhiggiisa ah ayaa dibadda joogee.
Gebagabadii: haddaan dulmiga liitiga ah iyo boobka bulshada looga tudhin, wasiir iyo masuul kasta oo xukumadda ka tirsan, waxa aannu ku muujin qalinka oo cid walba hungurigiisa iyo tudhaale-la’aantiisa u soo bandhigi bulshada. Masuulku mas’uuliyaddiisa haku koobnaado. Masaakiintana dulmiga iyo dhaca haka daayo.
W/Q. Cabdicasiis Ibraahin Ciise